Yintoni iVPN, isebenza njani kwaye yenzelwe ntoni? I-Androidsis
Yintoni iVPN kwaye yenzelwe ntoni?
Sivile ngokuqinisekileyo ngeVPN ngamanye amaxesha. Uninzi lwenu luyakwazi ukuba luyintoni okanye luyintoni. Nangona kukho abasebenzisi be-Android abangazange beve ngezi leta zontathu. Ke ngoko, apha ngezantsi siza kuchaza ngakumbi ngeli gama, ukongeza kwinkcazo yalo siya kukuxelela ukuba yenzelwe ntoni. Kananjalo ezinye zeenzuzo okanye izinto ezingalunganga ezinazo.
Konke oku ukuze wazi yonke into malunga ne-VPNs, eya kuba luncedo olukhulu kuwe. Ngokukodwa ukuba ukhathazeke kakhulu malunga nokuba ngasese xa uqhagamshela kwinethiwekhi (inqaku lokuqala).
1 Yintoni iVPN
2 Izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga VPN
3 Eyona VPN ilungileyo ye-Android
I-VPN imele iNethiwekhi yangasese yangasese, esinokuthi siyiguqulele njengeNethwekhi yangasese yangasese. Itekhnoloji evumela umsebenzisi ukuba alungiselele ukhuseleko olukhuselekileyo lwenethiwekhi yendawo, eyaziwa ngokuba yi-LAN, kwi-Intanethi. Ngale ndlela, ungangena kwi-intanethi ngasese kwaye ukhuselekile. Le ndlela isetyenziswa kakhulu ngabantu abafuna ukukhangela ngaphandle kwedatha yabo ukuba ilandelwe, umzekelo.
Into eyenziwayo yile yenza unxibelelwano olufihliweyo, esiza kuthi sidibanise ngalo neseva. Kodwa, ukuze uqhagamshele, iserver ekuthethwa ngayo kufuneka ibonelele ngenkonzo yeVPN kwaye isixhobo sethu kufuneka sibe nesixhobo esivumela ukuba sinxibelelane. Logama nje sidityanisiwe, yonke into esiyenzayo okanye esiyithumelayo iyakubucala.
Oko uqhagamshele kwi-VPN, xa sikhangela inethiwekhi, i-IP yekhompyuter yethu okanye ifowuni ye-Android ayizukuphuma kule meko. Yintoni eza kuboniswa yi-IP yeseva yeVPN. Yeyona ndlela ikhuselekileyo, efumana abalandeli abaninzi emhlabeni, kuba ikhusela ubumfihlo nokukhuseleka kwethu ngalo lonke ixesha.
Ukusetyenziswa kwayo kuninzi namhlanje. Siyayibona indlela iinkampani zibheja ekwenzeni iinethiwekhi zangaphakathi zisebenzisa iVPN, apho abasebenzi baqhagamshela kwikhompyuter yabo, nokuba se-ofisini okanye ekhaya. Inethiwekhi ekhuselekileyo, ekungekho mntu ngaphandle kwenkampani ongena kuyo. Ngaphandle kokubonelela ngasese kukhuseleke kakhulu.
Izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga VPN
Ubumfihlo kunye nokhuseleko olunikwayo ngaphandle kwamathandabuzo yeyona nto iphambili, kunye nesizathu sokuba izigidi zabantu zisebenzise ezi ntlobo zonxibelelwano. Inokuba luncedo ngakumbi xa uqhagamshela kuthungelwano lukawonkewonke, olukhuseleke kancinci kunenethiwekhi ekhaya. Ngale ndlela, ukuba kunokwenzeka kubekho ukuba semngciphekweni kwinethiwekhi okanye umntu ozama ukufumana idatha, asinangxaki.
Ukongeza, ngokungasebenzisi i-IP yezixhobo zethu, asinangxaki ye-geolocation. Oku kuthetha ukuba Sinokufikelela kumxholo ovaliweyo kwilizwe lethu. Kwamanye amaphepha, umxholo uyavalwa ukuba awukho kwindawo ethile. Ndiyabulela kwi-VPN unako ukufikelela kuyo yonke le mxholo ngamaxesha onke.
Eyona nto iphambili, ngakumbi kwimeko yefowuni ye-Android, yiyo loo nto Ukusetyenziswa kwedatha yeselfowuni kuhlala kuphezulu. Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukuba usebenzise iVPN exhunywe kwinethiwekhi engenazingcingo. Ngaphandle koko, itya ngaphezulu kwesiqhelo, kwaye siphela ngaphandle kwedatha okanye kufuneka sihlawule imali eyongezelelweyo, into ekungekho mntu uyifunayo.
Eyona VPN ilungileyo ye-Android
Ukukhethwa kweVPN ye-Android kuye kwanda ngokuhamba kwexesha. I-Opera VPN yenye yezona zikhetho zaziwayo, nangona kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo ivaliwe ngokusisigxina. Ngethamsanqa, zininzi iindlela onokukhetha kuzo kwiVenkile yokuDlala. Ke singasifumana isicelo esifanelana noko sikukhangela ngendlela elula.
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo Siqokelele kwinqaku ukhetho olungcono kolu hlobo lwe-Android, unantoni fumanisa kule khonkco. Ezi zicelo zintlanu ziyahambelana ngokupheleleyo xa kufikwa ekunikezeleni kuthi unxibelelwano olukhuselekileyo nolwabucala ngalo lonke ixesha. Nganye inika imisebenzi eyahlukeneyo, ukuze ufunde ngakumbi ngayo kwaye ukhethe eyona ilungileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Yintoni iVPN kwaye yenzelwe ntoni?
Iqhawe likaMarginalia yiRPG ekhethekileyo kunye nesitayile esibonakalayo esenziwe ngamagcisa aphakathi
[APK] Uyikhuphelela njani kwaye uyifaka kanjani i-Launch ye-Samsung yamava kwiGalaxy yakho